Vaovao - Tany Diatomaceous ho an'ny famonoana bibikely
Efa nandre momba ny tany diatomaceous, fantatra koa amin'ny hoe DE? Eny raha tsy izany dia miomàna ho talanjona! Ny fampiasana ny tany diatomaceous ao amin'ny zaridaina dia tsara. Tany Diatomaceous dia vokatra voajanahary rehetra mahatalanjona izay afaka manampy anao hamboly zaridaina tsara sy mahasalama.
Inona ny tany Diatomaceous?
Ny tany dioma dia vita tamin'ny zavamaniry vita amin'ny fosily ary vovo-mineraly sedimentary voajanahary azo avy amin'ny sisa tavela amin'ireo zavamaniry ahidrza antsoina hoe diatom. Ireo zavamaniry dia anisan'ny rafitra ekolojika teto an-tany nanomboka tamin'ny andro taloha. Ny fitehirizana chalky ny diatoms sisa dia antsoina hoe diatomite. Ny diatom dia trandrahana ary araraka mba hatao vovoka izay misy endrika sy mahatsapa tena toy ny vovoka talcum.
Tany Diatomaceous dia pesticide mifototra amin'ny mineraly ary ny magôniôzy dia tokony ho 3 isan-jaton'ny manezioma, 5 isan-jato sodium, vy 2 isan-jato, kalsioma 19 isan-jato ary silikika 33 isan-jato, miaraka amin'ireo mineraly maro hafa.
Rehefa mampiasa tany diatomaceous ho an'ny zaridaina, dia zava-dehibe tokoa ny mividy ny tany diatomaceous "Grade Food" fa TSY ny tany diatomaceous izay efa ary efa nampiasaina tamin'ny sivana dobo filomanosana nandritra ny taona maro. Ny tany diatomaceous ampiasaina amin'ny sivana dobo filomanosana dia mandalo dingana hafa izay manova ny makiazy mba hahitana ambiny silica malalaka kokoa. Na dia mampihatra ny tany diatomaceous naoty sakafo aza, dia zava-dehibe indrindra ny fanaovana sarontava vovoka mba tsy hitsoka be loatra ny vovoka eto an-tany, satria ny vovoka dia mety hanelingelina ny fonosana ao amin'ny oronao sy ny vavanao. Raha vantany vao miposaka ny vovoka dia tsy hitondra olana aminao na amin'ny biby fiompinao izany.
Inona no ilain'ny Tany Diatomaceous any an-jaridaina?
Ny fampiasana ny tany diatomaceous dia betsaka fa amin'ny zaridaina diatomaceous dia azo ampiasaina ho bibikely. Diatomaceous Earth dia miasa mba hamongorana ireo bibikely toy ny:
Voangory Flea olon-dehibe
Sifotra ny sifotra
Amin'ireto bibikely ireto, ny tany diatomaceous dia vovoka mahafaty miaraka amin'ny sisiny maranitra mikraoskaopy izay manapaka ny fonony miaro azy ary malazo azy ireo.
Ny iray amin'ireo tombontsoa azo avy amin'ny tany diatomaceous ho an'ny fifehezana bibikely dia ny tsy fananan'ireo bibikely fanoherana azy io, izay tsy azo lazaina ho an'ny bibikely famonoana simika maro.
Ny tany dioma dia tsy hanimba ny kankana na izay zavamiaina bitika ilaina eto amin'ny tany.
Ahoana ny fomba fampiharana ny tany Diatomaceous
Ny ankamaroan'ny toerana ahafahanao mividy tany diatomaceous dia hanana torolàlana feno momba ny fampiharana ny vokatra. Toy ny fanafody famonoana bibikely rehetra, dia alao antoka fa vakio tsara ilay marika ary araho ny torolàlana momba izany! Ireo torolàlana dia ahitana ny fomba fampiharana tsara ny tany diatomaceous (DE) na ao anaty zaridaina na ao an-trano mba hifehezana bibikely maro ary koa hananganana sakana isan-karazany hamelezana azy ireo.
Ao amin'ny zaridaina diatomaceous tany dia azo ampiharina toy ny vovoka miaraka amin'ny mpangataka vovoka ekena ho an'ny fampiasana toy izany; indray, zava-dehibe indrindra ny fanaovana sarontava vovoka mandritra ny fampiharana ny tany diatomaceous amin'ity fomba ity ary avelao ilay sarontava mandra-pialanao ny faritra feno vovoka. Ataovy madio ny toerana misy ny biby sy ny biby mandra-pahatongan'ny vovoka. Rehefa ampiasaina ho fampiharana vovoka ianao dia te-hanarona ny tampony sy ny ilan'ny ravina rehetra miaraka amin'ny vovoka. Raha avy ny orana aorian'ny fampiharana ny vovoka dia mila averina alefa indray. Fotoana tsara hanaovana ny fampiharana ny vovoka dia aorian'ny orana kely na amin'ny maraimbe indrindra raha eo ambonin'ny ravina ny ando satria manampy ny vovoka hifikitra tsara amin'ny ravina.
Ity dia vokatra mahavariana voajanahary azo ampiasaina amin'ny zaridainantsika sy manodidina ny tranontsika. Aza adino fa ny "Sakafo Sakafo" an'ny tany diatomaceous no tadiavintsika ho an'ny zaridaina sy ny fampiasana an-trano.